Ko kana iyo iPhone 7 yanga isina mbiri kamera vhezheni? | IPhone nhau
Ko kana iyo iPhone 7 yanga isina mbiri kamera vhezheni? [Runyerekupe ... hazviite]
Pamakuhwa pamusoro peiyo iPhone 7, pane matatu anowanikwa mune ese madziva: kusavapo kweiyo headphone chiteshi, yakafanana dhizaini (iine zvishoma kugadzirisa) seiyo iPhone 6s uye yepamusoro kamera yeiyo Plus modhi. Pane aya matatu makuhwa, iyo chete inoita senge yakanaka, uye ini ndinoti zvinoita nekuti iyo 4.7-inch modhi yaisazove neiyi kamera, ndiyo iPhone 7 Plus mbiri kamera/ Pro. Uine izvi mupfungwa, ko dai Apple isingakwanise kuvhura chigadzirwa chine mbiri lens kamera?
Mhinduro yangu yaizove yakapusa uye yaizouya iri fomu yemumwe mubvunzo: nei tichifanira kutenga iPhone ine yakafanana dhizaini seyazvino uye hapana chiteshi chefoni? Chinhu chepedyo pane ichi chandinorangarira kwaive kufamba kubva pa iPhone 4S kuenda pa iPhone 5, asi iyo iPhone 5 yaisanganisira, kuwedzera mukuvandudzwa kweprosesa ne RAM, dhizaini iyo kune vakawanda yave iri yakanakisa iyo iPhone yave nayo kubvira kuvhurwa kwayo muna 2007. Kana Apple ikasavhura iPhone ine mbiri kamera, chimwe chinhu chingafanira kutorwa kunze kweheti kana vasingade iyo iPhone 7 kuti itenge zvakanyanya kushoma pane iyo iPhone 6s. Iyo Smart Connector Inogona kuwedzera, asi zvaizoitawo kuti tishandise imwe mari kuzvinhu zvekushandisa.
Apple ingadai yakasiya uye yaisazoburitsa iyo iPhone 7 ine mbiri kamera
Asi ngatiendei nezvikamu. Sezvandakaverenga mune akasiyana midhiya, chakanakisa chishandiso "firita" iripo nhasi ndizvo OnLeaks. Iyo NoWhereElse mupepeti yakaburitsa akasiyana maschemas uye inopa izvo zvinoratidza kuti iyo iPhone 7 Plus ichave neyakareba kamera kupfuura iyo 7-inch iPhone 4.7, izvo zvinogona kungoreva chete kuti mudziyo wavanomiririra unenge uine mbiri kamera.
Uye zvakare, CEO wekambani (ini handirangariri ndeipi chaizvo) akatofambira mberi kuti 2016 raizove gore ravaizotanga kuburitsa michina ine maviri-lens kamera. Pane rimwe divi, Sony akadaro mumusangano nevatengesi vake kuti Ini ndakanga ndarasikirwa nemutengi akakosha uye munhu wese aifunga kuti mutengi aive Apple. Chikonzero chekurasikirwa neavo kubva kuCupertino sevatengi ndechekuti Sony ingadai isina kusvika nenguva kuti ibudise ma-lens-maviri ma module, saka Apple ingadai yakafunga kuvimba LG Innotek, zvirinani kune 2016.
Mune maonero angu, uye saka ndinozvitaura mumusoro wenyaya, runyerekupe urwu haruzadzikiswe, kunyangwe isiri nguva yekutanga kuti titore kurerutsa chimwe chinhu chinopedzisira chaitika. Kwazvinobva izvo zvinofanirwa kutaura kuti Apple yakasiya paiyedza kuvhura iyo iPhone 7 Plus ine mbiri kamera ndiwo akafanana anovimbisa kuti kamera yeiyo 4.7-inch modhi ichave iine 21Mpx sensor, saka, sehuipi hushoma (uye husingafungidzike) uye kana zviri izvo, zvese zvishandiso zvinosanganisira kamera yakajairwa iyo inobvumidza kutora mapikicha akakurisa kupfuura eiyo iPhone 6s / Plus. Unozviona sei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Ko kana iyo iPhone 7 yanga isina mbiri kamera vhezheni? [Runyerekupe ... hazviite]
Ndanga ndiri muverengi weActualidad iPhone kwemakore, uye ini handifarire manyorerwo maitiro ayo blog iri kutora nguva pfupi yadarika. Semuverengi uye mushandisi weApple ini ndoda kuona zvakanaka-zvakanyorwa nhau, kunyangwe kana iri yezve runyerekupe. Iwe unoziva zvakanyatsonaka kuti dzimwe nguva runyerekupe haruvimbike, asi izvi zvinotaridzika zvakanyanya seSave Me DeLuxe pane blog yakakomba nezve tekinoroji ine akawanda maonero zvidimbu zvekuti zvakanyorwa musitayita isingakodzeri yepakati yakakomba. Pese pandinopinda mu blog zvishoma, uye ini ndinopedzisira ndazvisiya kune dzimwe nzira, uye zvingave zvinonyadzisa, nekuti sekutaura kwangu ndanga ndichipinda mairi kwemakore.
Ndokumbirawo kuti udzokere pakuva svikiro rakakomba, iwe unokwezva vaverengi vakasimba kwete vakomana vechidiki. Kana pamwe ndizvo zvaunoda.
Apple kuvhura 41st chitoro kuChina muna Chikumi 25
Mickey anokuudza iwe nguva zvinonzwika neiwatchOS 3